Pamusika zvakwakanakira uye tariro KOOWHEEL hoverboard K8 - Jomo Technology Co., Ltd
Pamusika zvakwakanakira uye tariro KOOWHEEL hoverboard K8
1. Kutanga mamiriro kuzvida vakadengezera sikuta
2. Musasiya pawaitengesa nepakati motokari.
3. K8 musika zvakanakira Tariro
Mumakore achangopfuura, pamwe upgrading pamusoro norukosoro, itsva simba nemotokari - nengaidzo motokari dzakanga aidiwa mudzimba uye vatorwa vatengi kudzivirira rayo zvakatipoteredza, zveupfumi uye yakakodzera features, vatengi vanobatsirwa upgrading chokufambisa kudiwa, pamusika mhiri kwemakungwa yakakura, kukura tarisiro anotarisirwa. Kubva yose itsva simba motokari maindasitiri, yakadzikama motokari, akangwara motokari vachava choruzhinji ramangwana kukura. China ndiyo nyika rinezvigaro goho uye aina yemagetsi kuzviremekedza vakadengezera sikuta munyika, nekurangarira kuti 90% of Global Balance sikuta indasitiri. Zvisinei, nokuda kushaya akakodzera mudzimba mirau nemitemo, yemagetsi sikuta mugadziri chigadzirwa magadzirirwo uye kugadzira muitiro pasina mwero kutungamirirwa, kushaya cherechedzo, zvichiguma chigadzirwa unhu haina inosimbiswa, pamusika samasumbu, ari copycat, mumusika dzinozara pamwe nyepera uye Chiber zvigadzirwa, vatengi havagoni kuziva kunaka chigadzirwa. The zviri pamutemo kodzero nezvido zvisina inosimbiswa, Product udzivirire ngozi vane misoro yatanga muna rapfuura gore, kuunza yakakura nazvo kuti vatengi, uye zvakakomba makadzivisa yemagetsi nepakati sikuta kuti kunze kwenyika.
Zvakasimba ndizvo chete zvinorarama, hwakanaka kuramba kukura utano nepakati motokari
The indasitiri inoda mabhizimisi kuti kubudisa zvigadzirwa, uye vanoshandisa vanoda mabhizimisi kuti inogona kuchengeteka. Nokuti nechiyero motokari indasitiri achiri kutarisana nematambudziko, mabhizimisi vanofanira kugadzirisa indasitiri nyaya, kuzvicheka-kufungisisa uye kutsvaka shanduko uye budiriro, kuti chigadzirwa unhu sezvo wokutanga, redefine kuti bhizimisi mitemo, uye anorenda kuumba yakanaka zvakatipoteredza musika makwikwi indasitiri pasi kuzviomesera chengetedzo mitemo. Tichifunga Hottest 6,5 padiki kwakajairika kuzvida BALANCInG sikuta kutengeswa pamusoro pakuenzanisa motokari pamusika. Kudivi rimwe, kuti bhizimisi pakafunuka anowedzera nokukurumidza, asi Ukuwo payo yakavhiringidzika makwikwi. "A Munhu mukati kosi yokudzidza anoratidza kuti wenhau. Nokuda kwokushaya mitemo, vamwe yemagetsi nepakati sikuta vagadziri vanoshandisa akaderera zvinoriumba, maviri gungano uye nedzimwe nzira kuderedza mari, hakusi kuwedzerera kutaura, ichi makwikwi anorura kungaita yose indasitiri nokukurumidza kudzokera zero, izvi bhiriyoni zana Currencykuva , pamusika kukura pachiyero motokari indasitiri kuchaita vanotarisanawo mukuru ngozi.
How kubvisa tupukanana pamusoro maindasitiri aya uye noutano hwakanaka nepakati motokari indasitiri wacho, redu KOOWHEEL michina kubva chete akamisa zvino rave vanobatisisa unhu uye vakachengeteka kutanga, kuti vabudirire razero netsaona, kupa kuchengeteka nokuti kuchengeteka vatengi. Sei makwikwi ane 6,5 padiki muduku hoverboar pamusoro pamusika, kupona zvinorarama pfumbamwe kukweshera hatichangogutsikani tariro kwakajairika 6,5 padiki yokutevedzera, asi pakusarudza Optimization uye utsanzi, kupa vatengi mutsva chakagadzirwa 6,5 padiki K8 yemagetsi nepakati sikuta kusangana kumusika kwokudiwa zvichataurirana kudhura kutsiva kwakajairika 6,5 padiki kwakanga kusina kufanana munhau.
K8 pamusika zvakanakira Tariro
1. private womuenzaniso zvigadzirwa.
Yakagadzirwa ne Italy Milan, inotonhorera uye nemamwe chitarisiko, chaiyo yakarongeka musimboti, akafarirwa nevanhu vatengi dzokuEurope uye American. Putsa yekare chitarisiko nokuputsa miganhu yose bvumidzwa kukanganisa
2. pcb taotao Dual hurongwa
Chakagamuchirwa Dual hurongwa motherboard kubva kambani taotao zvesainzi. Tichienzanisa pamusika zvakachipa mufashoni chete hurongwa motherboard, taotao ane nani kugadzikana hunyambiri ezvinhu, ndiwo inosimudzira kudzivirirwa pauzima kuchengeteka vanoshandisa.
Taotao Tech: 1, PC, mukuru, puranga, pamwe, 2pcs, gyroscopes.
-Kirasi yokutanga unhu injini muna Hong Hong Motors ane zvakanakira yepamusoro zvinovimbisa, kumeso pakufamba uye hapana ruzha.
Power mhando bhatiri rongedza, hwakareba. Koowheel K8 anoshandisa 14 simba rokuponesa chinoumba 24V mumhuri bhatiri ane simba bhatiri packs it, upenyu hurefu uye moto nedziviriro, akaedzwa, Mhanya kure kupfuura musika dzomuzana 36V nepakati sikuta, simba guru!
The bhatiri rongedza chakagadzirwa fireproof zvinhu, uye zviri nani kupfuura nyoro pasuru yaishandiswa nevamwe
5. Hand tambo
Nechiredzo mhando inotakurika tambo, rinogona kudzikiswa, akanaka uye yakakodzera, uye kunogona anazvo, zvichienzaniswa kwakajairika 6,5 ​​padiki akadzikama motokari. Zviri nyore kutakura pasina handbag
6. mutengo nani